Ukuzoba umfanekiso ngoMatshi 8 ngokwamanqanaba? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokudweba umzobo we-8 Matshi kwizigaba?
Ngumbono olungileyo ukunika umama okanye intombi yakho umzobo wokuqala ngo-Matshi XNUMX. Kule nto ayinamsebenzi wokuzoba, into ephambili kukuba yonke into ifanele isuke entliziyweni. Umzekelo, unokuzoba iiroses.
Ukwenza oku, thabatha iphepha, ipensile kwaye uqale.
Senza isangqa, kwaye sahlulahlulahlula iziqwenga ezi-4. Emva koko, kwikona ephezulu ngasekhohlo, zoba iziko le-rose. Emva koko sidweba i-rose petals kwikona esezantsi ngasekhohlo.
Emva koko, sitsalela iitapile ezisele kwikona ephezulu nangasekunene.
emva koko sidweba amayeza eeroses kwaye sihombise umzekelo obomvu.
Unokuzoba mhle ngolu hlobo Ikhadi lokubingelela ngoMatshi 8.
Imigca yakho mda ichaza indawo ye-rosebuds kunye nekhalenda
Zoba i-rose buds zethu, uqalile ukuzoba ukusuka embondeni
Ngalo mgaqo, sizizoba zontathu ezi roses
Zoba umfanekiso wegqabi lekhalenda
Zoba amanani u-8
Zoba inani lesi-8 kunye nobume bamagqabi er rose
ngoku ungayenza imibala
Ngomhla we-8 kaMatshi- uSuku lwaMabhinqa lwaMazwe ngaMazwe-yile nto kufuneka uqale ngayo ekukhetheni umzobo weholide. Ungabiza iklasi - uyilo lwantlandlolo lweenombolo ezisibhozo. Kwakhona, yintoni esondeleyo emfazini? Bantwana, iintyatyambo, uthando ... Ungazoba kolu luhlu. Umsebenzi, lungiselela iphepha, ipensile, irabha kunye nengcinga encinci. Imiyalelo ngamanyathelo inyathelo lokuzoba imifanekiso ngoMatshi 8 inokujongwa kule ndawo.
Le yiposikhadi yantlandlolo yentsusa; evela kuHusbandquot;
Ewe kunjalo, nge-8 kaMatshi ukuthenga iposikhadi. Kodwa isipho esenziwa ngesandla sakho sisoloko sisempilweni. Ngale nto siza kuyifumana iluncedo: ipensile, irabha, irula, iipensile ezinemibala-bala, iipensile, iphepha, ungathatha ikhadibhodi. Kwaye ke jonga nje imiyalelo kwaye uyile.
Kumfanekiso ngo-Matshi 8, ungazoba isidlo seentyatyambo.
Okokuqala, zoba umzobo wetheko. Sichaza amagqabi kunye neentyatyambo.
Emva koko szoba i-pestle embindini weentyatyambo nganye ukusuka kwisikhephe, ukongeza isangqa esincinci kwisangqa esikhoyo.
Inqanaba elilandelayo kukunika ifomu ecacileyo. Iimpikiswano kufuneka zijikelezwe, kwaye ntyatyambo nganye yahlulwe yangamacandelo (amachaphaza). Unokongeza iintyatyambo ze-tulip eziza kuphakama ngaphezu kwesikhephe. Bopha isidlo esikhoyo ngeribhoni okanye isaphetha, usidwebe.
Ngoku kufuneka uzobe amagqabi. Ungazoba amagqabi fern. Iyatsalwa ngokulula, iyimfuneko ukophula iphepha libe ngamanqaku amaninzi acacisiweyo. Amanye amagqabi ajikeleze.
Ihlala kuphela yokuhlobisa.
Kufuphi ungabhala kakuhle nge-8 kaMatshi.
Uhlobo lwesimboli yeholide ngoMatshi 8 ziintyatyambo. Ungayibeka intyatyambo kwikhadi lokubingelela, umzekelo i-rose:
Ndicinga ukuba imisebenzi enjalo iya kuthandwa kakhulu ngesondo elifanelekileyo.
Apha kule ndawo sinokubona indlela onokwenza ngayo umzobo wokuqala kaMatshi 8 usebenzisa isicatshulwa; ;S-poapnoe-foto /
Kumzobo kaMatshi 8, ubukho bamanani 8 kunye nemibala kunyanzelekile, usengabhala igama lokukuvuyela.
Into ephambili yomzobo ngo-Matshi 8 linombolo 8, kubalulekile ukuba libonakale kwimvelaphi ngokubanzi. Ukongeza, inani elinesibhozo lifana nophawu olusisiseko, ngoko kuya kufuneka uqale uzobe imigca ye-wavy yenani elinesibhozo, emva koko usayine amagama u-quot; Matshiquot ;. Ngasemva, kufuneka uzobe iintyatyambo, iisimboli zasentwasahlobo.
Nge-8 kaMatshi, ungazoba nayiphi na into oyifunayo, ukusuka kwi-chamomile ukuya kwi roses. Ndifumene ividiyo kwiYouTube indlela yokudweba i-rose ngamanqanaba, ungasebenzisa le vidiyo, into ephambili kukuzixhobisa ngegqabi, ipensile kunye nomonde. Ndizamile ukuzoba ngokwam, kodwa indalo ayivumi ukuwuvuza ngalobu buchule)
Mhlawumbi ayizozizo zoqobo, kodwa zintle.
Nanku umzobo, ungatsalela umnxeba ikhadi leposi, ndicebisa ukuba uzobe ngokwamanqanaba ngoMatshi 8.
Kwaye ungayidweba ngolu hlobo.
Isimboli sesibhozo sika-Matshi ziintyatyambo. Unokukhetha nayiphi na intyatyambo, nokuba yirhasi okanye iinyibiba, okanye mhlawumbi ikhephu. Ukuzoba iintyatyambo akunzima kangako. Iya kuba ngumfanekiso omnandi kakhulu ukuba uzoba isidlo seentyatyambo sikanina okanye umfazi wakho amthandayo.
Ukuze uzobe umfanekiso ngoMatshi 8, ukuqala, kufanelekile ukujonga tutorials zevidiyo ezimbalwa ezibonakalisa indlela entle umzobo osibhozo:
Emva kokuba umzobo wesibhozo udwetshiwe, sibhala ukuvuyisana nge-8 kaMatshi kwaye siyihombise, umzekelo ngeentyatyambo, zinokuba ziiroses, okanye intwasahlobo mimosa. Nantsi imizobo embalwa apho yonke into iboniswe ngokwamanqanaba:
Ukwenza ikhadi ngokwalo kulula kakhulu, kufuneka uthathe ikhadibhodi enkulu kwaye uyiqengqele & quot; nencwadi;, emva koko ugubungele iphepha lokupeyinta - oku kuyakuba yimvelaphi ephambili yekhadi, emva koko unokufaka umfanekiso. Kwaye sele ngaphakathi kwikhadi ukwenza umbhalo obhalisayo, onokuthi ukongeza kuwo imidwebo yeentyatyambo. Ndicinga ukuba ikhadi elinezinto zeentyatyambo ezomileyo kunye namagqabi liya kukhangeleka lintsusa, kodwa apha kufuneka ulungiselele i-herbarium kwangaphambili.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,361.